Bubata Usoro | Importgbọ M Mbubata
GỊNỊ bụ usoro iji bubata ụgbọala gị n'alaeze UNITED? Dabere na ụzọ gị maka ndebanye aha ọ nwere ike ịdị iche. Anyị bu n'obi inye gị echiche maka ihe ọ gụnyere mgbe ị nwetara nhota okwu.
Na Mbubata ụgbọ ala m, anyị na-enye ọrụ pụrụ iche nke ijikwa ọdịmma gị kpamkpam mgbe ị na-ebubata ụgbọ ala na UK site na ebe ọ bụla n'ụwa. Kemgbe ọtụtụ afọ, ị na-ahụ mbubata na mbupụ ụgbọ ala gburugburu ụwa, anyị ghọtara otú usoro si dị mgbagwoju anya ma ọ bụrụ na ịnweghị ahụmịhe mbụ. Anyị nọ ebe a iji nyere aka ma nwee obi ụtọ ịnye gị ọrụ ọsọ ọsọ, nke enyi na enyi, iji zute ihe ị chọrọ.
N'okpuru ebe a bụ usoro ibubata ngwa ngwa nke ọtụtụ ụgbọ ala na-arụ, nke anyị na-enye mana anyị nwere ike ịnyere aka na obere ma ọ bụ obere dị ka ịchọrọ na ụgbọ ala ọ bụla dịgasị iche. Ya mere egbula oge ị nweta aka maka ọnụego.
Ozi & hicgbọ ala Ozi
Ka anyị ebe ụgbọ ala gị dị, n'ebe ọ bụla n'ụwa yana nkọwa nke ụgbọ ala gị na-eji akwụkwọ ntinye akwụkwọ anyị. A na-etinye nkwubi okwu ọnụ nke na-echebara ọnụahịa mbupu ọhụrụ na ihe pụrụ iche chọrọ iji debanye aha ụgbọ ala gị. Ozugbo ị nwere obi ụtọ. site na ntinye okwu, anyị nwere ike ịmalite usoro mbubata ụgbọ ala gị.
Ngwaahịa na Transportgbọ njem Globalwa
Anyị na-ahazi mkpokọta ụgbọ ala gị gaa n'ọdụ ụgbọ mmiri ma ọ bụ ọdụ ụgbọ elu mba kacha nso wee hazie ibu oke osimiri ma ọ bụ njem ụgbọ ala gị gaa UK. Oghere oge dịgasị iche dabere na obodo sitere na usoro njem.
Omenala & Nzipu
Anyị na-ekpochapụ ụgbọ ala gị site na kọstọm UK wee mezue ọkwa gị nke mbata ụgbọ ala na HMRC. Ọ bụrụ na ụgbọ ala gị akwadoro maka mgbanwe, anyị ga-anakọta ụgbọ gị wee bufee ya n'ogige anyị dị na Castle Donington. a ga-enyefe gị.
Mgbanwe na Ule
Ọ bụrụ na ụgbọ ala gị chọrọ ule IVA, anyị ga-eme ngwa ule IVA na VOSA n'aha gị. Anyị na-akwado ụgbọ ala gị iji zute ụkpụrụ okporo ụzọ UK iji hụ na ọ bụ iwu okporo ụzọ. A na-eme MOT iji hụ na ndị ọzọ karịa nnabata, ọ dị mma iji. Ụgbọ ala gị na-esonyere ya site na ule IVA site n'aka ndị ọrụ nka anyị zụrụ azụ n'ụlọ ọrụ nyocha nke ISO 17025 kwadoro. N'oge usoro a, ụgbọ ala gị nwere mkpuchi zuru oke.
Anyị na-edobere akwụkwọ anamachọihe gị n'aka DVLA yana nsonaazụ ule na-esote yana akaebe nnabata. Ụgbọ ala gị adịla njikere maka ịnakọta ma ọ bụ ibuga ya na plate Registration na tax okporo ụzọ, iwu okporo ụzọ UK zuru oke.